Tavoahangy miaraka amin'ny hena avy amin'ny tsiranoka mofomamy mofomamy miaraka amin'ny dingana fotsy
Puff pastry miaraka amin'ny mofomamy manitra
Ny fomba mahazatra ho an'ny tsiro miaraka amin'ny mofomamy manitra dia tena tsotra. Amin'ny litera afaka minitra vitsy dia ho tianao ny koba iray misy voankazo mamelana, ary ao anatiny ny fofona mamy sy mamy indrindra.
Azo atao amin'ny hena rehetra izany. Ny henanina na ny henan-kisoa dia tsara ho azy. Ny famokarana dia mamokatra be dia be ary mora manalefaka ny koba. Azonao ampiana ihany koa ny legioma. Ny vy dia azo alefa avy hatrany amin'ny famonoana tsy misy alohan'ny fanorohana, saingy raha ny hevitro, dia mihalalina izany.
Puff pastry - 1 Kilogram
Beef Meat - 0,5 Kilogram
Olivanina - Art. 2. lovia kely
Salt, dipoavatra - manandrana
Ahoana ny handraisana "tavoahangy miaraka amin'ny mofomamy manitra"
Esory ny hena ao anaty rano mihetsiketsika, alaviro, afoy ny vina, horonan-tsary ary tapaho ao anaty kib. Ary asio koa ny oven maina amin'ny 180-200.
Mafana ny menaka ao anaty menaka iray ary atsipazo ny tongolo mandra-pahatonga azy ho mangarahara sy malefaka, mampihetsi-po foana.
Aorian'ireo tongolobe, alefaso ny henan'efitra ary atsipazo azy mandra-pahatongan'ny vatany tsara tarehy. Rehefa manitra ny hena dia asio rano kely, ampio sira, dipoavatra mba hanandrana, handrakotra ary hamenoana ny 5 minitra.
Ao anatin'ilay vilia fanatobiana, mametraka ny koba, mamarana ny sisin'ny bobongolo. Mialà sasatra eo amin'ny andaniny mba hamafa ny mofomamy. Eo amin'ny koba no mametraka ny fofona efa mafana. Ambony amin'ny farim-bary iray hafa ary miaro ny sisiny.
Manindrona ny atody sy ny menaka ny tampon'ny mofomamy. Manao ny mofomamy ho an'ny 30 minitra amin'ny ambaratonga 180. Bon appetit!
← "Cockerel Short" avy amin'ny boaty fohy
Dolma avy amin'ny ravina voavoly →